तौल कसरी बढाउने ? यस्तो छ तरिका - Babal Khabar
यहाँ धेरैलाई तौल घटाउने चिन्ता छ । कसरी तौल नियन्त्रण गर्ने ? उनीहरु अनेक उपाय खोजिरहेका छन् । त्यसो त तौल घटाउने चक्करमा क्लिनिक धाउनेहरु पनि उत्तिकै छन् । छिटो र सजिलो ढंगले तौल घटाउने व्यापार पनि राम्ररी फस्टाउँदैछ ।
तर, चिन्ता तौल घटाउने मात्र होइन, तौल बढाउने पनि छ । कतिपयलाई भने घट्दो तौल वा शरीरको मापदण्डभन्दा कम तौलले चिन्ता बढाएको छ । मान्छेको तौल उसको उचाईबाट निर्धारण गरिन्छ । कति उचाईको मान्छेका लागि कति तौल उपयुक्त हुन्छ भनी निर्धारण गरिएको छ ।
हाम्रो उचाई अनुसार तौलको सन्तुलन मिल्नुपर्छ । जस्तो कि पाँच फिट पाँच इन्च अग्ला व्यक्तिको तौल ६० केजीसम्म सहि मानिन्छ । त्यो भन्दा अधिक कम वा धेरै तौल हुनु स्वभाविक होइन । अस्वभाविक तौल रोगको घर हो ।
तौल किन बढाउने त ?
स्वस्थ्य शरीरको मापदण्ड पुरा गर्न । त्यसबाहेक सुहाउँदिलो ज्यान देखाउन । उचाई अनुरुप मोटाइ भएन भने ज्यान खिरिलो देख्छ । लुगा लगाउँदा पनि ह्याङगरमा टाँगिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले खिरिलो ज्यान भएकाहरु स्वभाविक रुपमा मोटाउन चाहन्छन् । तर, कसरी ?
शरीरको तौल बढाउनका लागि खानपानमा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । मकैको रोटी तौल बढाउन निकै उपयोगी हुने बताइन्छ । मकैको रोटी यस्तो प्रभावकारी खाना हो, जसले सजिलै पातलो व्यक्तिको मोटाइ बढाउँछ ।
केरा र दुध
केरा र दुध पनि तौल बढाउन उपयोगी हुन्छ । केरामा यस्तो पोषक तत्व हुन्छ, जसले पातलो शरीर मोटाउने क्षमता राख्छ । साथै केरा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक पनि छ ।
अब कुरा गरौं दुधको । दुध क्याल्सियमको राम्रो स्रोत हो । क्याल्सियमले हड्डी बलियो बनाउँछ । केरा र दुधलाई एकसाथ सेवन गर्दा मोटोपन बढाउन सहयोग गर्छ । खासगरी ब्रेकफास्टमा केरा र दुधको कम्बिनेसन ठिक हुन्छ । तर, याद राख्नुपर्ने कुरा चाहि, दुध शुद्ध हुनुपर्छ । केरा पनि प्राकृतिक रुपमै पाकेको हुनुपर्छ ।
घिउ र सख्खर
घिउ र सख्खर हरेकजसो घरमा सजिलै प्राप्त हुन्छ । यस दुबैको मिश्रणले पोषक तत्व पैदा हुन्छ, जो शारीरिक स्वस्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ । त्यसैले दैनिक शख्खर र घिउ मिलाएर सेवन गर्नुपर्छ, दुब्लोपन कम हुन्छ ।
हरियो मटरको सेवन पनि लाभदायक हुन्छ । यसले रगत र मांशपेशी बनाउन सहयोग गर्छ । नतिजा, दुब्लोपन हट्छ ।
नियमित रुपमा दुध र महको मिश्रण बनाएर पिउनुपर्छ, तौल बढ्छ ।
खानपानले मात्र सबै कुरा पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि नियमित वर्कआउट पनि चाहिन्छ । बिहान चाडै उठेर घुम्न निस्कनुपर्छ । यसले शरीर बलियो हुन्छ । शारीरिक कमजोरी हटाउने यो प्राकृतिक उपाय हो ।
राम्रो स्वास्थ्यका लागि तनावमुक्त रहनुपर्छ । मनमा तनाव लिइरहँदा पनि शरीर दुब्लो हुन्छ ।
दैनिक बिहान र बेलुकी खाना खाइसकेपछि तीस मिनेटका लागि विश्राम गरौ । यसले पनि शरीरको तौल बढ्छ ।
दैनिक स्याउको सेवन
दैनिक दुई वटा स्याउ सेवन गर्नुपर्छ । यसले भोक जगाउन मद्दत गर्छ । भोग जागेपछि हामी खाना खान्छौ, जसले तौल बढाउँछ ।
by : online khabar
Prevविश्वको महंगो फोन गौडाको छालाको कबर भको भर्टु अब नेपालमा, कती पर्छ हेर्नुहोस्
nextयस्तो छ पारस शाह चढ्ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकल,मुल्य सुन्दा सात्तो जाने हेर्नुहोस् कति पर्छ?